Ihowuliseyili GQ-SN UkuLungelelaniswa kokuHanjiswa kweFlash - Ulwelo (alkali-free) mveliso kunye nabenzi | Gaoqiang
I-GQ-SN luhlobo lwesinyanzelo sekhonkrithi eselulwelo sombuso. Elona candelo liphambili le-GQ-SN yi-sodium aluminate. Umxube usetyenziselwa ikakhulu ikhonkrithi efafaziweyo; inokukhawulezisa inkqubo yokuqinisa ikhonkrithi ngokufanelekileyo, kwaye inezibonelelo zokuxinana kothuli olusezantsi, ukomelela okuphantsi, amandla aphezulu exesha elide, njl.
Ukukhawulezisa ukuqina kwekhonkrithi ngokufanelekileyo. Inokwenza ixesha lokusetha lokuqala libe ngaphantsi kwemizuzu emi-5 kwaye ixesha lokugqibela lokuseta lingaphantsi kwe-10 min.
2 Yandisa ngokufanelekileyo amandla kwangoko, kwaye akukho siphumo kumandla exesha elide.
Ukomelela okuphantsi ekusebenziseni umyinge wekhonkrithi.
Ukuncipha okuncinci, kunokuphucula ukuphuma kwamanzi.
5 Sibuthathile ubuntununtunu be-polycarboxylate-ukunciphisa amanzi kwizinto ezingafunekiyo, ukusetyenziswa kwamanzi kunye idosi.
Izinto zokwakha ezinesiqiniseko, ngakumbi kucetyiswa ukuba kwakhiwe amandla okuqala, njengokutshiza udaka, ukutshiza ikhonkrithi, iplagi yekhonkrithi, itonela yokufaka ikhonkrithi, njl.
Iinkcukacha zobuGcisa / iiPropati eziHlangileyo
Ukuxinana / (g / cm3), 22 ℃
Umxholo wekhloride / (%)
Umxholo wealkali / (%)
*Ezi mpahla zichazwe ngentla apha azizizo iinkcukacha zemveliso.
Ubungakanani: Umthamo ocetyiswayo yi-6.0-8.0% ngokobunzima bezinto ezibophayo. Umthamo osebenzayo kufuneka ube ngokusekwe kuhlobo lwesamente, ubushushu bendalo, ubungakanani besamente, ubungakanani bamandla, itekhnoloji yokwakha kunye nemfuno yeprojekthi. Kuyacetyiswa ukuba uvavanye intsebenzo usebenzisa izinto zokwenza izinto kwindawo leyo.
Ukusetyenziswa: Beka izinto zokuxuba zesamente kwi-injector, i-accelerator yongezwa kwimilomo. Isamente yamanzi Umyinge ucetyiswa ngo-0.33-0.40 ngodaka, 0.38-0.44 ngekhonkrithi, kunye nokuqinisekisa udaka lokutshiza okanye ikhonkrithi ayihambi, umbala ococekileyo.
Iphakheji: 200kg / igubu, 1000kg / IBC okanye ngesicelo.
Ukugcina: Igcinwe kwindawo yokugcina umoya eyomileyo eyi-2-35 ℃ kwaye ipakishwe ilungile, ngaphandle kokutywina, ubomi beshelfu bunama-90 iintsuku. Ukufaneleka ngaphambi kokusetyenziswa ukuba ungaphezulu kobomi beshelufu.
Le ncwadana inemifanekiso yereferensi kuphela kodwa ayizibangi ukuba igqityiwe kwaye akukho sinyanzelo. Nceda uqhubele phambili ukuyivavanya ukusetyenziswa.
Egqithileyo I-GQ-210 Ummeli wamandla okuqala
Okulandelayo: Kwiselulosi kaEtere HPMC for Ukutyabeka / eziphathekayo / Grout njengoko Agent Water-Ukugcina